Ciidamada booliska Somaliland oo howlgalo dad lagu qabtay fuliyay | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Ciidamada booliska Somaliland oo howlgalo dad lagu qabtay fuliyay
Ciidamada booliska Somaliland oo howlgalo dad lagu qabtay fuliyay
Ciidamo ka tirsan booliska Soomaliland ayaa lagu soo waramayaa inay Xalay howlgallo kala duwan ka sameeyeen Magaalada laas-caanood ee Xarunta Gobolka Sool, halkaasoo bilihii la soo dhaafay ay ka dhaceen falal Amni darro.
Ciidamada ayaa howlgalka waxay ka sameeyeen xaafadaha qaar ee Magaalada Laas-caanood, iyaga oo sidoo kale wadooyinka ku baarayay Gaadiidka yaryar, halka mararka qaar muraayadaha madow ay ka fiiqayeen Gawaaridaasi.
Dad ku sugan Magaalada laas-caanood ayaa waxaay sheegeen in Ciidamada ay howlgalka ku qab qabteen dad farabadn, oo la geeyay Saldhiga Ciidanka Booliska ee Magaalada laas-Caanood.
Saraakiisha Ciidamada Soomaliland ee Magaalada laas-Caanood weli faah fahin kama bixin howlgalalda iyo dadka lagu soo qabtay, hayeeshee dhowr jeer ayay sheegeen inay sameyn donaan howlgallada si amniga loo sugo.
Magaalada laas-caanood ee Xarunta Gobolka Sool ayaa dhowrkii bilood ee la soo dhaafay waxaa ka dhacayay dilal qorsheysan oo qaarkood loo geystay askar ka tirsan Ciidamada Soomaaliland, waxaana weli jirin cid sheegatay mas’uuliyada dilalkaas.
Previous articleBooliska oo lagu amray in ay si buuxda u dhaqan geliyaan amarrada ka dhanka ah COVID-19
Next articleSenatarka Kiambu oo ballanqaaday inuu si daacad ah ugu adeegi doono Jubilee